Okubalulekile kwe-ITO kuyinto yohlobo lwe-N semiconductor material, okubandakanya i-ITO powder, okubhekiswe kukho, ukunamathisela okusetshenziswayo nefilimu ebonakalayo ye-ITO.Izicelo zayo ezinkulu zehlukaniswe zaba: flat panel ukubonisa (FPD) umkhakha, ezifana liquid crystal ukubonisa (I-LCD), ukubonisa okuncane kwefilimu transistor (I-TFT-LCD), isibonisi se-electroluminescent (THE), ukukhishwa kwensimu ukubonisa (FEDI), ukukhanya kwe-electro-organic okukhipha ukubonisa kwepaneli eyisicaba (OELD), isibonisi se-plasma (PDP), njll.; imboni ye-photovoltaic, njengamaseli elanga-amafilimu amancane; ingilazi esebenzayo, ezifana ingilazi lembhali infrared, ingilazi elwa ne-ultraviolet efana nengilazi yodonga lwamakhethini, indiza, imoto eqeda inkungu, isifihla-buso nengilazi Izindawo ezintathu ezinkulu njengamadiski ohlobo.
Isidingo samanje samakhaya sezinhloso ze-ITO cishe 150 Ngokuthuthukiswa komnotho waseChina kanye nokujulisa ukwahlukaniswa kwabasebenzi ezimbonini zomhlaba, abakhiqizi abaningi beplanethi eyisibonisi eJapan, ETaiwan, kanti iSouth Korea isithuthele izizinda zazo zokukhiqiza yangenisa ezweni lase China. Esikhathini esizayo, Izwekazi laseChina lizoba isikhungo sokukhiqiza i-LCD esikhulu kunazo zonke emhlabeni.Kulinganiselwa ukuthi ukufunwa kwasekhaya kwezinto ezibhekiswe ku-ITO ku 2012 kuzodlula 500 amathani.
Ukulethwa kwezinto eziqondiwe ze-ITO, abahlinzeki abakhulu ikakhulukazi baseJapan. Phakathi kwazo, Japan Amandla, IJapan Japan Mitsui Mining Corporation, neJapan Tosoh zifaka ngaphezu koku 80% emakethe ye-ITO..
Prev: Chaza ulwazi lokuphalaza okubhekiselwe ebangeni eliphakathi nendawo le-magnetron
Next: Kungani ifilimu yomkhiqizo iwela ngesikhathi sokugcoba komshini ？？